Adobe က Creative Cloud - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: Adobe က Creative Cloud
Tag Archives: Adobe က Creative Cloud
Adobe က Creative Cloud သို့တိုက်ရိုက်စားသုံးမိနှင့်အတူ MOG ဗဟိုထည့်သွင်းသည့်စနစ်
[ပေါ်တူဂီ, ဇန်နဝါရီလ 8, 2019] MOG Technologies က, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဒီနေ့က၎င်း၏ဗဟိုစားသုံးမိပါ tools တွေကိုအပြည့်အဝပေါင်းစည်းမှုကိုကြေညာ - နှစ်ဦးစလုံး mxfSPEEDRAIL နှင့် SKYWATCH ထုတ်ကုန်လိုင်းဘို့ - Adobe®ကို Creative Cloud®နှင့်အတူ ။ မီဒီယာပညာရှင်များအသစ်သောနည်းပညာများ, စနစ်များ, ပလက်ဖောင်းနှင့် devices များရဲ့ပြန့်ပွားနဲ့အလွန်အမင်းတောင်းဆိုမှုများစျေးကွက်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ အတူအဆင်သင့်အကြောင်းအရာရယူခြင်း ...
Premiere နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို Adobe Creative Cloud Workflows ချောမွေ့ပြီးနောက်ရင်ပြင်ထောင့်ကွက်စနစ်များ '' နယူး CatDV Panel များ
Warwick, ဗြိတိန် - စက်တင်ဘာ 12, 2017 - Square ကိုထောင့်ကွက်စနစ်များ, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် CatDV မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) စနစ်နောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီ, ယနေ့ယင်း၏ကို Adobe Premiere Panel ကိုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ Panel ကိုနောက်မှာတစ် All-သစ်ကို Adobe ကတစ်ဦးကို Advanced version ကိုပြသလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးပြားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပျကွောငျးကို Adobe Creative Cloud အသုံးပြုသူများအများအတွက်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်တိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည် ...
Bluefish444 ကို Adobe Premiere Pro ကို CC ကို၏နောက်တစ်နေ့လွှတ်ပေးရန်ပံ့ပိုးမှုပြသ
အဆင့်မြင့် 4K သရုပ်ပြမည်, IBC အက်စ်မဲလ်ဘုန်းမြို့သြစတြေးလျ, စက်တင်ဘာလ 7, 2016 ... Bluefish444, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K / 2K / HD ကို / SD က SDI ကဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူမှာက Adobe ကဗီဒီယို tools များနှင့်အတူတိုးတက် 4K HDR ကို Post-ထုတ်လုပ်မှု Workflows ကိုကြည့်ပါ IBC 2016 မှာAdobe®ကို Creative Cloud® CC ကိုဗီဒီယိုက apps များ၏လာမည့်ဗားရှင်းနဲ့အတူ HDR ကိုထောက်ခံကြောင်း။ Bluefish444 SDI နှင့် HDMI ကိုဗီဒီယို IO ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဿုံသင့်လျော်ကြသည် ...
Bluefish444 ယုဂ်မှ azPTP အဆင့်မြှင့်မှုများ | 4K နျူထရွန် - 4K & ကျော်လွန်ဘို့ပြင်ဆင်
ဖီးနစ်-based azPTP 1999 ကတည်းကအဓိကစတူဒီယို, ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, ကြော်ငြာအေဂျင်စီများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဖောက်သည်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားထုတ်လုပ်မှုသမားတွေပေးလျက်ရှိသည်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပြည့်စုံပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုတည်းဖြတ်ရေး, အသံ, အရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့် cleanup န်ဆောင်မှုကို ပူဇော်. , သူတို့မျက်နှာပြင်မှဇာတ်ညွှန်းထဲကနေဟာယယဇ်ပူဇော်သဖြင့်, 6K, 5K, 4K နှင့် HD မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိပါသည်။ azPTP ရဲ့လုပျငနျးပျေါမှာထငျရှားထားပါတယ် ...
Bluefish444 Adobe က, Avid, ရဝါးမြိုဖို့ယုဂ် 4K နျူထရွန်ပံ့ပိုးမှုရရှိစေ
အက်စ်မဲလ်ဘုန်းမြို့, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ 444K / 4K / HD ကို / SD က SDI ကဗီဒီယိုကဒ်သြစတြေးလျ ... Bluefish2, ထုတ်လုပ်သူ, Window installer ကို 5.13.0, Bluefish7 မှယုဂ် 8K နျူထရွန်နှင့်ယုဂ်နျူထရွန်ထောက်ခံမှုဆောင်ခဲ့တစ်ဦးကို Windows4နဲ့ Windows 444 ကားမောင်းသူဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် သဟဇာတဗီဒီယိုက applications များ။ Scratch 8 ဝါးမြိုခြင်း Scratch 8 software ကိုသိမ်းသွင်းယခုယုဂ် 4K နျူထရွန်ဆောင်ခဲ့နှင့်သဟဇာတဖြစ်တော်မူ၏ - 4K / 2K / HD ကို / SD က SDI နှင့် HDMI output နှင့်တစ်ဦး ...
IBC 444 မှာနျူထရွန် | Bluefish4 Introduces ယုဂ် | 2014K နျူထရွန် & ယုဂ်
BLUEFISH444 ယုဂ်မိတ်ဆက် | 4K နျူထရွန်နှင့်ယုဂ် | နျူထရွန် low profile တစ်ဝက်အတိုင်း LENGTH uncompressed 4K / 2K / HD ကို / SD က SDI I / O video card Applications ကို 3rd ပါတီ developer များအဘို့ SDK ကိုတို့ပါဝင်သည်, 4K 60p I / O Workflows, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြားခံ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု, ဗီဒီယိုဆာဗာများ, encoding က, ကုဒ်ဖြုတ် & ၏ streaming များ MPEG နှင့် H.264, Windows, Linux နဲ့ Mac အတွက် OSX Operating System ကိုနယူးကတ်များထောက်ပံ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် Non-တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ CG ...
Bluefish444 ကို Adobe Creative Cloud 2014 များအတွက်နယူး SDI ပံ့ပိုးမှုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
Bluefish444, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ 4K / 2K / HD ကို / SD က SDI ကဗီဒီယိုကဒ်ထုတ်လုပ်သူ, 5.12.0 ကို Adobe Creative Cloud application များရန်မကြာသေးမီ 2014 update ကိုထောက်ပံ့ဖြည့်စွက်, သစ်တစ်ခုက Windows Installer ၏လွှတ်ပေးရန်ကြေညာခဲ့သည်။ Adobe Premiere Pro ကို CC ကို (2014) ကို Windows 444 နဲ့ Windows7များအတွက် Bluefish8 ရဲ့အသစ် installer ကိုအားလုံးဖန်တီးယုဂ်, ယုဂ် 4K ဆူပါနိုဗာကဗီဒီယိုကတ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက update ကိုဆောင်တတ်၏ ...
လက်ထောက်အယ်ဒီတာ - ဗီဒီယို / အသံ Post ကိုထုတ်လုပ်မှု
ကို Creative ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် - Flexible နာရီ, ခရီးသွား Paid, ကျောင်းသားများလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
အကြီးတန်း UI ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်
အလွတ်တန်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / Video Editor Internship
ကျနော်တို့ diffrent ပရိုဖိုင်းကိုဥပမာဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယို Editor ကိုအဘို့အ emploeeys ရှာဖွေနေပါတယ်